LinuxCapable - Yako Hushamwari GNU/Linux Howtos Source
Arch Linux Yakavakirwa
Linux Mint Debian Shanduro
Maitiro ekuisa HPLIP paUbuntu 22.04 LTS
Yakaburitswa musi: Chishanu, Chivabvu 20, 2022
Iyo HPLIP chirongwa chakatangwa neHP inc. ine chinangwa chekuita kuti zvive nyore kune vatariri vehurongwa uye vashandisi veLinux inoshanda sisitimu ine…
Maitiro ekuisa Plex Media Server paArch Linux
Plex Media Server isoftware yekuchengetera ako ese edhijitari midhiya zvirimo uye kuiwana kuburikidza nemutengi application seTV yako, NVIDIA Shield, ...
Maitiro ekuisa PostgreSQL paUbuntu 22.04 LTS
PostgreSQL yakagadzikana uye yakavimbika dhatabhesi manejimendi system yakashandiswa kweanopfuura makore makumi maviri. Inotsigirwa nenharaunda inoshanda…
Maitiro ekuisa MariaDB paUbuntu 22.04 LTS
Yakapedzisirwa pa: Chishanu, Chivabvu 20, 2022
MariaDB ndeimwe yeanonyanya kufarirwa yakavhurika-sosi dhatabhesi padyo neayo akatanga MySQL. Vagadziri vekutanga veMySQL vakagadzira MariaDB mukupindura kutya kuti MySQL yaizongoerekana yave sevhisi yakabhadharwa ...
Maitiro ekuisa Visual Studio Code paLMDE 5 "Elsie"
Visual Studio Code ndeye yemahara uye ine simba sosi-code edhita yakagadzirwa neMicrosoft yeWindows, Linux, uye macOS. VSCode inopa akawanda maficha akadai serutsigiro…
Maitiro ekuisa PowerShell paLMDE 5 "Elsie"
Microsoft PowerShell ishanduko uye inotungamira-inotungamira script mutauro unogona kushandiswa kuita otomatiki. Iyo zvakare inowanzopetwa nehumwe matekinoroji seCI / CD…
Maitiro ekuisa VSCodium paLMDE 5 "Elsie"
VSCodium iforogo yeMicrosoft Visual Studio Code Edhita yakagadziridzwa kuti ive neyakavhurika-sosi yekuwana. Iyo kodhi kodhi yechigadzirwa ichi inogona kuwanikwa…
Maitiro ekuisa Opera Browser paLMDE 5 "Elsie"
Opera ndeyemahara, muchinjika-chikuva chewebhu browser yakagadziriswa neOpera Software uye inoshanda seChromium-based browser. Opera inopa yakachena, yemazuva ano web browser iyo ...
Maitiro ekuisa XanMod Kernel paPop!_OS 22.04 LTS
XanMod ndeyemahara, yakavhurika-sosi general-chinangwa Linux Kernel imwe nzira kune stock kernel ine Pop!_OS 22.04 LTS. Inoratidzira zvigadziriso zvetsika uye zvitsva maficha uye iri ...
Maitiro ekuisa GIT paFedora 36 Linux
GIT ndeye yemahara uye yakavhurika-sosi vhezheni yekudzora sisitimu inogona kunyatso kubata mapurojekiti madiki kana makuru. Inogonesa vakawanda vanogadzira kushanda pamwechete ...
Maitiro ekuisa Redis paFedora 36 Linux
Redis ndeye yakavhurika-sosi (BSD ine rezinesi), mu-memory kiyi-kukosha data chimiro chitoro chinoshandiswa sedhatabhesi, cache, uye meseji broker. Redis inotsigira zvimiro zvedata senge tambo, hashes, rondedzero, seti, yakarongedzwa ...
Maitiro ekuisa Apache neModSecurity paUbuntu 22.04 LTS
ModSecurity, inowanzonzi Modsec, ndeyemahara, yakavhurika-sosi yewebhu application firewall (WAF). ModSecurity yakagadzirwa semodule yeApache HTTP Server. Nekudaro, kubva pamazuva ekutanga,…
peji1 peji2 ... peji80 Next →
© 2021 - 2022 LinuxInokwanisa kodzero dzese dzakachengetedzwa.
Ese ma logos, matrademark uye marejisheni akanyoreswa zvinhu zvevaridzi vazvo.
Iyi webhusaiti ndeyezvinangwa zvekudzidzisa chete. Hapana waranti kana muripo unopihwa chero kurasikirwa kwedata kana Hardware.